Gaheen Kaambiriiji Anaalitikaan filannoo Keeniyaa keessaati bahe qoratamuu qaba jedhame - BBC News Afaan Oromoo
Gaheen Kaambiriiji Anaalitikaan filannoo Keeniyaa keessaati bahe qoratamuu qaba jedhame
Goodayyaa suuraa Kaambiriij Anaalitiika filannoo Keeniyaa keessatti gahee guddaa bahuu ibseera
Pireezident Uhuuru Keeniyaattaan filannoo alanaa akka injifatan gargaareera jechuun dhaabbata gorsaa biyya Ingiliiz kan ta'e Kaambiriiji Anaalitika irratti qorannoo guutuun akka gaggeesamu qindoominni mormitootaa ibsa BBC'f kenneen hime.
Hoogganaan dhaaba mormituu National Super Alliance (Nasa) Normaan Magaayaa, Kaambriiji Analalitikaa fi paartii biyya bulchaa jiru ''fedha ummataa ukkaamsaniiru'' jechuun himataniiru.
Hooggantootni Kaambriji Analitiikaa to'aannoo Keeniyaa keessatti qaban ilaalchisee wayita of jajan ija kaameraa keessaa galaniiru jedhameera.
Dhaabbatichi yakka kamuu hin dalagne jechuun himaticha ofirraa ittiseera.
Paartiin obbo Keeniyaattaa, Jubiliin, dhiibbaan garee sanii guddaa miti jechuun gadi qaqqabeera.
Dura taa'aa Itti aanaan paartii Jubilii Daavid Muratee akka Rooyitarsiitti himanitti ''dhimma sumudaa ykn Branding waliin waan wal qabateen malee hariiroo kalatti hin qabnu jedhaniiru''
Haasaa taasifaman hunda barreesineerra
Kaambiriiji Anaalitiks dubbii ijoo addunyaa kan ta'e erga filannoo bara 2016 Doonaald Traamp akka injifatan gargaarsa taasiseeti. Gaaffii guddaan amma jiru tooftaa itti fayyadamanii fi haala itti odeeffannno fuula feesbuuki namootaarraa itti guuraniidha.
Doonaald Traampiin gargaaruun dura dhaabbatichi Keeniyaa keessatti erga filannoo bara 2013 ti hojiilee garaa garaa hojjechuutti ture.
Akka marsariitiin dhaabbatichaa mul'isutti projeektii qorannoo akkaan guddaa ta'ee fi namoota 47,000 akka saamudaatti fayyadame geggeeseera. Qorannichi dhimmoota ijoo siyaasaa biyyoolessaa fi naannoo, amala filattoota, maddeen odeeffannoo filatamoo fi kanneen biroos ifa baaseera.
Duula miidiyaa hawaasummaa eegaluunis hordoftoota hedduu horachuu danda'aniiru.
'Duula Siiyaasa ammayyaa'
Hanga ammaatti gaheen Kaambiriiji Anaalitiik filannoo Keeniyaa keessatti bahe qulqullaayee hin beekamne. Ibsa Wiixata darbarseen Kaampaanichi miidiyaa hawaasummaa akkuma ajeensiiwwan daldalaa kan biroo beeksisaa meeshaaleef akka itti fayyadamu beeksiseera.
Obbo Magaayaan haala odeeffannoo itti guuran fi ergaaleen proopogaandaa miidiyaa hawaasummaan darban dhaabbata saniin fayidaarra oolan ilaachisee yaaddoo guddaa qabaachuu eeraniiru
''Kun intarpraayizii yakkamaa proopogaandaa fi waliin dhahuun yaada fedha uummataa ukkaamsuu qabudha'' jechuun BBC tti kan himan Maagaayaan, mootummoonni Ingilizii fi Ameerikaan qorannoo kana irratti akka isaan gargaaran gaafataniiru.
Filannoo Keeniyaa guduunfaa dhabe
27 Onkololeessa 2017
Daldaltoota sharafaa adamsuurra filannoowwan biraa ilaaluun furmaata ta'uu mala
Tereezaa Meey aangoorra turuufi dhiisuu murteesuuf sagaleen kennamuuf
'Somaaleetti namoota gaa'ila keessa jiran keessaa %1 qofatu qusannaa maatii fayadama'
Masriin qomeen keelloo akka hin gurguramne jette
Ergamaan nyaata maamilaaf geessaa jiru nyaatee ari’ame
Gaazexeessaa Kaashoogjiin tarree namoota Cimoo keessatti eerame